Onye a na-eme nkiri bụ Chief Agụ na onye ntaakụkọ Broadway TV kparịtara ụka mgbe ndị uwe ojii nzuzo bụ DSS hapụrụ ya. Agụ sị n’ekwentị gwa onye ntaakụkọ ahụ na ndị DSS emeghị ya ihe ọjọọ ọ bụla mgbe ha kpọchiri ya.
N'okwu ya, o kọwara na ihe ekike ya kere na-egọsị bụ ọwụwa anyanwụ na ọ bụghị Biafra, ọ bụghị IPOB nke o ji abụ ESN. Ọ tụkwasịkwara n'elu ya na ọ bụ Ojukwu, Ikemba Nnewi mere ka ọwụwa anyanwụ bụrụ akara njirimara ndị Igbo dịka ndị na-achọ ọganihu mgbe ọ bụla na ebe ọ bụla. Agụ gwara onye ntaakụkọ na onye legharịrị anya n'ime Afrịka ga-ahụ na ndị Igbo na-eme nke ọma site na-ịgba ọke mbọ.
Okemmiri Amokwe kwuru hoo haa na ndị Igbo na-agbara onwe ha mbọ ime nke ọma na-agbanyeghị na Gọọmentị anaghị ele ha anya. Ọ gbakwụnyere n'ezoghị ọnụ na ọ ga-akara ndị Igbo mma ma ọ bụrụ n'ala Naịjirịa ga-ekewa ngwa ngwa n'ihi na o nyeghị elele ndị Igbo na-erite n’ime ya.
Chief Agụ mechiri mkparịtaụka ya na onye ntaakụkọ ahụ site n'ikwu na ọ bụ ihe gbagọrọ agbagọ ịmanye ndị mmadụ ịnọ n'otu nnukwu obodo dị ka Naịjirịa. O kwubiri na ọ dị oke mkpa ịkpọkọta ndị Igbo ọnụ ka e wee were udo gaa n’ihu.
Ekee m bredi kete nga – Chiwetalụ Agụ
Nrụtụaka – Sahara Reporters
A gụọla ya ugboro 193